About Us - Chao Yu milina Co., Ltd
Xiangshan Chaoyu milina Manufacturing Co., Ltd. Faritany iray amin'ireo firenena 100 fivondronana ambony ao amin'ny faritanin'i Zhejiang Xiangshan County Industrial Park, Xiangshan saikinosy dia tsara tarehy tanàna lalina. Tsy tery ao amin'ny lalambe Hangyong dia nanitsy, fitaterana no tena mety.
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa mandrakotra ny faritra hatramin'ny 1 tapitrisa metatra tora-droa. Mandroso amin'ny famokarana fitaovana. Taorian'ny tato anatin'ireo taona faramparany, ny mitohy fampandrosoana sy ny fampandrosoana, namorona ny vokatra vaovao napetraka ny fampandrosoana sy ny famokarana tsipika miasa mafy varotra tambajotra any amin'ny iray amin'ireo fototra famokarana manokana kabinetra.
Ny orinasa dia manana hery matanjaka ara-teknika, fitaovana feno milina fanodinana, vokatra tsara, rehefa avy-fanompoana varotra dia araka ny fenitra iraisam-pirenena ISO9000 ny fitantanana, mba hanome mpanjifa amin'ny hatsaran'ny vokatra sy ny tolotra. Mandritra izany fotoana izany, ny orinasa teknolojia mifantoka amin'ny fanatsarana sy fampandrosoana ny vokatra vaovao, ka ny vokatra teo amin'ny toerana mpitarika ao amin'ny orinasa.
Company dia ho tsara toetra, ary ny vidiny takatry ny fanompoana voahevitra toy ny raharaham-barotra tanjona. Amin'izay, ny orinasa mpiara-miasa rehetra ao amin'ny orinasa mba hikarakara sy hanohana ny orinasa ny mpanjifa sy ny mpiara-miasa aminy mba haneho ny fisaorana avy amin'ny fo!
NO.268 Danyang Road, Xiangshan Economic Development Zone, Ningbo City, Zhejiang Province, Sina